Maxay ka dhigan tahay saddexleeydii uu xalay xulka England u dhaliyey Raheem Sterling?? – Gool FM
Maxay ka dhigan tahay saddexleeydii uu xalay xulka England u dhaliyey Raheem Sterling??
(London) 23 Maarso 2019. Xulka qaranka England ayaa 5-0 ku xaaqay xalay dhiggooda Czech Republic oo marti u ahaa kulan ka tirsan tartanka Euro 2020.
Kulankooda furitaanka tartanka Euro 2020 ayey xalay xulka England guul ku bilowdeen waxaana saddex ka mid ah shanta gool ee kulan u dhaliyey Raheem Sterling.
Laacibka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Raheem Sterling ayaa saddex gool ee kulankan kala dhaliyey daqiiqadihii 24’aad, 62’aad iyo 69-aad.
Haddaba maxay ka dhigan tahay saddexleeyda uu xalay xulka England u saxiixay Raheem Sterling?:-
>- Waa saddexleeydii ugu horreysay (first hat-trick) oo uu Raheem Sterling u dhaliyo xulkiisa qaranka England.
>- Raheem Sterling ayaana saddexleey u dhaliyey xulkiisa qaranka England 13 maalmood kaddib markii uu hat-trick u ansixiyey kooxdiisa Man City.
>- Raheem Sterling ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey xulka qaranka England ee saddexleey (hat-trick) u dhaliya kooxdiisa iyo dalkiisa hal bil gudaheed tan iyo Alan Shearer oo bishii September ee sanadkii 1999-kii saddexleey ka kala dhaliyey Luxembourg & Sheffield Wednesday, Sterling ayaana saddexleey ka kala dhaliyey Kooxda Watford & Czech Republic.
Berbatov oo xaqiijiyay in Manchester United ay heysato fursad weyn ay ku garaaci karto Barcelona
Macallin Tite oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha xulka qaranka Brazil ee la kala ciyaari doona Panama iyo Czech Republic